वर्षका आकर्षक पुरुषको सूचिमा को-को अटाए ? हेर्नुहोस् नेपालका १० आकर्षक पुरुषहरु ! हेर्नुहोस | darpannepal
वर्षका आकर्षक पुरुषको सूचिमा को-को अटाए ? हेर्नुहोस् नेपालका १० आकर्षक पुरुषहरु ! हेर्नुहोस
सर्वाधिक आकर्षक महिला– पुरुषको खोजी सजिलो काम होइन । आकर्षक महिला–पुरुष यस्तै हुन्छन् भनेर ठोकुवा गर्ने वस्तुवादी एवं वैज्ञानिक मापदण्ड पनि छैन ।कसैलाई कसैको आँखा मन पर्छ त कसैलाई पर्फेक्ट फिगर । कोही क्याडबरी ओठप्रति आकर्षित भैरहेका हुन्छन् त कसैलाई चकलेटी अनुहारले तानिरहेको हुन्छ ।
कोही अनुहारको वनावट त कोही रंगमा मुग्ध भैरहेका हुन्छन् । कसैलाई बौद्धिक सुन्दरताले लोभ्याइरहेको हुन्छ । त्यसैले सर्वस्वीकार्य ‘ड्रिम गर्ल’ वा ‘ड्रिम ब्वाई’को खोजी जटिल विषय हो ।संसारभर फरक–फरक मापदण्डका आधारमा सर्वाधिक आकर्षक महिला–पुरुष खोजी गरिन्छ । त्यसमा सर्वेक्षण, जनमत, व्यवसायिक सफलता, प्रभाव, सामाजिक योगदान, बौद्धिकता, सुन्दरताजस्ता पक्षलाई आधार बनाइएको हुन्छ ।
आकर्षण महिला–पुरुष छनौटमा प्राय:जसो मिडियामा छाइरहने, सेलिब्रेटी तथा सामाजिक भूमिका देखिएका व्यक्तिहरू नै पर्छन् ।विगत १० वर्षदेखि प्रणय दिवसको अवसर पारेर साप्ताहिकले विविध क्षेत्र एवं ब्यवसायिक पृष्ठभूमिका प्रतिनिधि पात्रका मतका आधारमा नेपालका सर्वाधिक आकर्षक पुरुष–महिला खोज्ने जमर्को गरिरहेको छ । प्रस्तुत छ यो वर्ष आकर्षक पुरुषको सुचीमा पर्न सफल व्यक्तिका बारेमा जानकारी :
झन्डै एक दशकदेखि नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको नेतृत्व गरिरहेका छन्– पारस खड्का । उनकै नेतृत्वमा नेपाली क्रिकेटले एकपछि अर्काे सुखद् नतिजा हासिल गरिरहेको छ ।६ फिट १ इन्च अग्ला पारसको आकर्षक व्यक्तित्वले धेरैलाई मोहित तुल्याउँछ । ३१ वर्षीय अलराउन्डर पारस राइट ह्यान्ड ब्याट चलाउँछन् भने उनी राइट ह्यान्ड मिडियम फास्ट बलर हुन् ।
२. सन्दीप लामिछाने
पछिल्ला चार वर्षमा युवा क्रिकेट सेन्सेसनका रूपमा सन्दीप लामिछानेको उदय पनि गज्जब कै छ । सन्दीपले ‘नाम र दाम’ दुवै कमाउँदै राष्ट्रिय रूपमा मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै तहल्का मच्चाइरहेका छन् ।
आर्थिक हिसाबले विश्वको सबैभन्दा ठूलो क्रिकेट लिग इण्डियन प्रिमियर लिग (आइपिएल)देखि बिग बाससम्मका ठूला र प्रतिष्ठित प्रतियोगितामा उनको उपस्थिति त्यसको प्रमाण हो । चितवनका १८ वर्षीय सन्दीप सन् २०१६ देखि राष्ट्रिय टिममा सहभागी छन् ।
३. कुलमान घिसिङ
लोडसेडिङ हटाएर कुशल व्यवस्थापकमा दरिएपछि कुलमान घिसिङ धेरैका प्रिय भएका हुन् । विद्युत् प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त भएपछि घिसिङले आफ्नो व्यवस्थापकीय कुशलता दर्साउँदै इच्छाशक्ति र क्षमता भए असम्भव केही छैन भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गरे ।
प्राधिकरणमा सुधारका काम गरेर त्यसलाई नाफामा पुर्‍याए । रामेछापको बेथानमा जन्मिएका घिसिङले पुल्चोक क्याम्पसबाट पावर सिस्टम इन्जिनियरिङमा मास्टर्स तथा पोखरा विश्वविद्यालयबाट ईएमबीए गरेका छन् ।
४. अनमोल केसी
चकलेटी लुक्सका अभिनेता अनमोल केसीलाई अहिले नेपाली चलचित्रका सबैभन्दा महँगा स्टार मानिन्छ । युवापुस्ताका अभिनेताहरूमा उनको स्टारडम सबैभन्दा शक्तिशाली छ । अनमोलको नामैले फिल्म हिट हुन्छन् । रोमान्टिक अभिनेता भुवन केसीका २४ वर्षीय छोरा अनमोल जता गए पनि प्रशंसकहरूबाट घेरिन्छन् ।
प्रदीप खड्का नेपाली सिने उद्योगका चर्चित स्टार हुन् । ललितपुरको कुसुन्तीमा जन्मिएका खड्काले मार्केटिङमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । छोटो अवधिमै ठूलो स्टारडम निर्माण गर्न सफल प्रदीप अहिलेका महँगा अभिनेतामा गनिन्छन् । लियोनार्दो डि कार्पियोलाई आर्दश मान्ने २९ वर्षीय प्रदीपले एक समय नेपाल टेलिभिजनमा ‘भुराभुरीको हल्लाखल्ला’ शीर्षकको कार्यक्रम समेत चलाएका थिए । प्रदीप अभिनेतासँगै मोडल तथा निर्माता पनि हुन् ।
सन्दीप क्षेत्री वीरगन्ज, छपकैयाबाट सिनेमाको हिरो बन्न भनेर काठमाडौं आएका थिए । उनले त्यसका लागि अभिनयको तालिम लिए अनि थिएटरमा काम गरे तर, आफ्नो ह्युमरस क्यारेक्टरका कारण उनले पछि नेसनल टेलिभिजनमा ‘विकेन्ड शो’ तथा ‘द फलप शो’ कार्यक्रम चलाए ।
जब कान्तिपुर टेलिभिजनबाट ‘ह्वाट द फलप’ को प्रसारण प्रारम्भ भयो, त्यसपछि क्षेत्रीले पछाडि फर्केर हेर्नुपरेको छैन । ३४ वर्षीय सन्दीप अहिले चलचित्र, स्टेज तथा टेलिभिजन सबैतिर छाइरहेका छन् । ५ फिट १० इन्च अग्ला सन्दीपले म्यानेजमेण्टमा स्नातकोत्तर गरेका छन् भने उनी विज्ञापन, चलचित्र आदिमा काम गर्नुका साथै प्राध्यापनसमेत गर्छन् ।
भर्सटाइल अभिनेताका रूपमा सौगात मल्लको बेग्लै पहिचान छ । ब्लकबस्टर ‘लुट’मा हाकु कालेको भूमिकामा दमदार अभिनय गरेपछि प्रसिद्धि कमाएका मल्ल थिएटर हुँदै चलचित्रमा आएका हुन् । नवपरासीका सौगात स्टाइलभन्दा बढी अभिनयमा विश्वास गर्ने अभिनेता हुन् । मल्लको आकर्षक व्यक्तित्व एवं अभिनय क्षमतालाई धेरैले रुचाएका छन् ।
८. दयाहाङ राई
भोजपुरमा जन्मिएका दयाहाङ राई भिन्न अभिनय क्षमताका कारण लोकप्रिय छन् । ५ फिट ७ इन्च अग्ला राईले सन् २००६ मा ‘अनागरिक’बाट चलचित्रमा डेब्यु गरेका थिए । चलचित्र ‘लुट’को गोफ्लेको भूमिकामा उनलाई धेरैले मन पराए । अभिनयसँगै निर्देशन एवं लेखनमा समेत सक्रिय दया थिएटर हुँदै चलचित्रमा आएका हुन् ।
९.आशिरमान देशराज जोशी
अभिनेता आशिरमान देशराज जोशीको चर्चा चलचित्र ‘ग्याङ स्टार ब्लुज’बाट भएको हो । ६ फिट ३ इन्च अग्ला आशिरमान युवतीहरूमाझ निकै लोकप्रिय छन् । बैंकर रविना देशराजका छोरा आशिरमानको अभिनय क्षमताको प्रसस्त प्रशंशा हुने गरेको छ । उनी अभिनेतासँगै मोडल तथा भिजे समेत हुन् ।
बारा स्याउलीचोकका नाजिर हुसेन ‘पुन्टे परेड’बाट नेपाली चलचित्रमा भित्रिएका हुन् । थिएटर हुँदै सिने नगरीमा आएका हुसेनको अभिनय क्षमता अब्बल छ नै उनी शारीरिक रूपमा समेत उत्तिकै आकर्षक छन् ।
आधा दर्जनभन्दा बढी चलचित्रमा अभिनय गरिसकेका नाजिरले झन्डै २ दर्जनजति नाटकमा अभिनय गरेका छन् । स्नातक तहमा अध्ययनरत २७ वर्षीय हुसेन ५ फिट १० इन्च अग्ला छन् । साप्ताहिकबाट
darpannepal March 13, 2019